रोजगारको सिलसिलामा मलेसियामा पुगेका म्याग्दीका प्रेम उतै अस्ताए ! हार्दिक श्रद्धान्जलि – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/रोजगारको सिलसिलामा मलेसियामा पुगेका म्याग्दीका प्रेम उतै अस्ताए ! हार्दिक श्रद्धान्जलि
रोजगारको सिलसिलामा मलेसियामा पुगेका म्याग्दीका प्रेम उतै अस्ताए ! हार्दिक श्रद्धान्जलि
रोजगारको सिलसिलामा मलेसियामा पुगेका म्याग्दीका एक युवाको मृ’त्यु भएको छ । जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५, शिखको स्वाँतका प्रेम पाईजा पुनको मृ’त्यु भएको हो । मलेसियाको जोहोरमा काम गदैं आइरहेका पुनको मृ’त्यु भएको त्यहाँ रहेका नेपालीले बताएका छन् । मलेसियाको पेराकमा काम गदैं आइरहेको अवस्थामा केही समय अगाडी मात्रै कम्पनीबाट सरेर गएको बताइएको छ ।
मृ’तकका बारेमा जानकारी प्राप्त भएकाले आवश्यक कागजातको तयारी भइरहेको वडा अध्यक्ष दिनेशकुमार पुनले बताए । उनका अनुसार श’व ल्याउने तथा अन्य कानुनी प्रक्रियाका लागि वडामार्फत पहल भइरहेको बताए। उनले श्रीमतिले नाता प्र’माणित गरेर पठाएको बताए । आर्थिक अवस्था कमजोर रहेकाले सहयोग गर्न समेत अध्यक्ष पुनले अनुरोध गरे । मृ’तकको श’ब नेपालमै ल्याएर अ’न्तेष्टी गरिनेछ । मृ’त्युको कारण खुलेको छैन ।
दार्चुला : पहिरोमा दम्पत्ति पुरिए, छोरा भागेर जोगिए